Waa kuma macallinka xiga ee shaqadiisa ku weynaya ka hor imaanshaha Super League kaddib Jose Mourinho? – Gool FM
(England) 21 Abriil 2021. Tababarihii kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur ee Jose Mourinho ayaa shalay laga ceyriyay shaqadii uu ka hayay kooxdaas, waxaana loo aaneeyay inuu kasoo horjeestay in Spurs ay ka mid noqoto kooxaha European Super League aas-aasay, taasoo keentay inuu shaqadiisa ku waayo.
Waxaa haatan lagu soo warramayaa in macallinka Liverpool ee Jurgen Klopp uu noqon karo macallinka xiga ee shaqadiisa ku weyn ku lumin kara ka hor imaanshaha tartanka cusub ee Super League.
Tababaraha Jarmalka u dhashay ayaa sanadkii 2019 sheegay inuusan rajeyneyn in tartanka European Super League uu hirgalo, waxaana kaddib ciyaartii xalay ee ay kooxdiisa bareejada la gashay Leeds United uu sheegay inuu wali qabo fikirkiisii, hase ahaatee, sababtaas darteed uusan uga tageyn shaqada Reds.
“Waxaan maqlay inaan is casilayo, haddii waqtiyadu ay igu adkaadaan waxaan ku adkeystaa inaan sii joogayo” ayuu Klopp yiri kaddib ciyaartii xalay.
Maadaama uu tababarahan kasoo horjeedo fikirka ah in kooxaha is baheystay ay tartan cusub bilawdaan, waxaa lagu soo warramayaa inay Liverpool shaqada ka ceyrineyso macallinkeeda sida saadaal la sameeyay lagu sheegay.
Muxuu Zidane kaga jawaabay go'aanka ay Real Madrid kaga qayb noqotay aas-aaska European Super League?